Sayenzi Inowirirana Nezviri muBhaibheri Here? | Mibvunzo yeBhaibheri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bislama Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Turkmen Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Hongu inowirirana, asi kunyange zvazvo Bhaibheri risiri bhuku resayenzi, parinotaura zvine chokuita nesayenzi rinozvitaura zvakarurama. Ona mienzaniso iri pasi apa inoratidza kuti sayenzi neBhaibheri zvinowirirana uye kuti zvaifungwa nevanhu zvinosiyana sei nezviri mariri.
Denga nenyika zvakaita zvokusikwa. (Genesisi 1:1) Izvi zvinopesana nezvinotaurwa mungano dzakawanda zvokuti denga nenyika hazvina kuita zvokusikwa asi zvakangoerekana zvavapo netsaona. VaBhabhironi vaiti denga nenyika zvakazvarwa navanamwari vakabva munyanza mbiri. Vamwewo ndivo vanoti denga nenyika zvakabva pazizai zihombe.
Jehovha Mwari ane mitemo inoshanda zvakanaka yaakagadza kuti ishande muchadenga uye panyika kwete kuti vanamwari venhema ndivo vanoita zvavada. (Jobho 38:33; Jeremiya 33:25) Pasi rose pane nhema dzinodzidziswa zvichinzi matambudziko atinosangana nawo anokonzerwa nehasha dzavanamwari uye hatina zvatingaita kuti tizvidzivirire.
Nyika yakaturikwa pasina chinhu. (Jobho 26:7) Kare kare vakawanda vaiti pasi rakaita sepamusoro petafura uye tafura yacho yakagara pamusoro pezimhuka zihombe rakadai senyati kana kuti kamba.
Mvura inenge iri munyanza nemakungwa inosimuka yozonaya ichizadza nzizi nezvitubu. (Jobho 36:27, 28; Muparidzi 1:7; Isaya 55:10; Amosi 9:6) Kare kare vaGiriki vaiti mvura iri mumakungwa inofamba nepasi yonozadza nzizi uye pfungwa iyi yakaramba iripo kusvikira makore okuma1700.
Makomo anokura uye anoitawo madiki, uye makomo atava kuona nhasi aimbova pasi penyanza. (Pisarema 104:6, 8) Asi, pane nhema dzinotaurwa zvichinzi vanamwari vakasika makomo ari sezvaari nhasi uno.
Utsanana hunochengetedza utano. Mitemo yakapiwa vaIsraeri yaiti munhu ageze kana abata chitunha, vane zvirwere zvinotapukira vagariswe kwavo vega, uyewo tsvina yevanhu inyatsofushirwa. (Revhitiko 11:28; 13:1-5; Dheuteronomio 23:13) Asi panguva yakapiwa vaIsraeri mitemo iyi, vaIjipiti vakanga vaine tsika yokurapa maronda vachishandisa mishonga yakasanganiswa netsvina yevanhu.
Zvikanyatsoongororwa, hapana panganzi Bhaibheri riri kurasika. Pasi apa pane mienzaniso yezvinonzi Bhaibheri riri kurasika panyaya dzesayenzi:
Nhema: Bhaibheri rinoti denga nenyika zvakasikwa mumazuva 6, zuva rimwe chete riri remaawa 24.
Chokwadi: Bhaibheri haritauri kuti Mwari akatanga rini kusika denga nenyika. (Genesisi 1:1) Uyewo, mazuva okusika anotaurwa muchitsauko 1 chaGenesisi haataurwi kuti aiva akareba makore mangani. Zvose zviri zviviri denga nenyika zvinotonzi zvakasikwawo “muzuva” rimwe chete.—Genesisi 2:4.
Nhema: Kuti miti ikure, inoda chiedza chinobva kuzuva, asi Bhaibheri rinoti miti ndiyo yakatanga kusikwa zuva richizotevera.—Genesisi 1:11, 16.
Chokwadi: Bhaibheri rinotaura kuti zuva, iro riri imwe yenyeredzi dziri ‘mumatenga’ rakasikwa miti isati yasikwa. (Genesisi 1:1) Chiedza chezuva chakasvika panyika pazuva rokutanga pakasikwa denga nenyika. “Zuva” rechitatu parakazosvika chiedza chakanga chava kukwanisa kukudza miti. (Genesisi 1:3-5, 12, 13) Zuva rakazotanga kunyatsooneka pave paya.—Genesisi 1:16.
Nhema: Bhaibheri rinoti zuva rinotenderera nyika.
Chokwadi: Muparidzi 1:5 inoti: ‘Zuva rinobuda, uye rinovira, uye rinokurumidza kudzokerazve kwarinobudira.’ Zvisinei mashoko aya anoratidza kuti kana uri panyika zuva rinooneka seriri kufamba. Kunyange nhasi, munhu anogona kutaura kuti zuva “rabuda” kana kuti “ranyura” asi achiziva zvake kuti nyika ndiyo iri kutenderera zuva.
Nhema: Bhaibheri rinoti nyika yakaita setafura zvokuti kumucheto kwayo kune mawere.
Chokwadi: Bhaibheri rine mashoko okuti “kumigumo yenyika” zvichireva nzvimbo iri kure kure kwete kuti pasi rakaita setafura. (Mabasa 1:8) Zvakangofanana nokutaura kunoita vanhu kwokuti “mativi mana enyika” zvichireva kuti pasi rose.—Isaya 11:12; Ruka 13:29
Nhema: Bhaibheri rinoti urefu hwechero denderedzwa hunowanikwa nokutaimuza ka3 urefu hwokubva kumucheto kwedenderedzwa kusvika kune mumwe mucheto asi uchipfuura nepakati chaipo pedenderedzwa racho. Asi nzira yakarurama ndeyokutaimuza urefu hwokubva kumucheto kwedenderedzwa kusvika kune mumwe mucheto uchipfuura nepakati chaipo napi (π) kana kuti 3.1416.
Chokwadi: Urefu hwokubva kumucheto kuenda kune mumwe mucheto asi uchipfuura nepakati chaipo pedenderedzwa redziva resimbi yakanyungudutswa rinotaurwa pana 1 Madzimambo 7:23 na2 Makoronike 4:2 hwaiva makubhiti 10 uye ‘paida tambo yakareba makubhiti 30 kuri poteredza.’ Nhamba dzakashandiswa apa inhamba dzakazara dziri nyore kunzwisisa. Nhamba idzi dzinogona kusiyana zvishomanene, zvichienderana nokuti wayera denderedzwa racho nokunze here kana kuti nechomukati.